Wararka ka imaanaya Dubai ayaa sheegaya in qof dalxiise ah laga qaaday lacag dhan Afartan kun oo dollar oo ah ganaax gaari wadid ah afar saac uun gudahood, kaas oo socday ilaa labo boqol iyo soddon kiiloomitir hal saac oo qura, as...
Ugu yaraan labo ruux ayaa ku dhimatay dab gaari ku qabsaday Talyaaniga
Booyad iyo gaari kale oo isku dhacay iyaga oo maraya waddo mashquul badan oo ku taalla magaalada Bologna ee waqooyiga dalka Talyaaniga ayaa sababay dab iyo qarax wayn. Muuqaal ay booliisku baahiyeen ayaa muujiyay booyadda...
Shalay waxaa xilka madaxweynenimada dowlad deegaanka Itoobiya iska casilay Cabdi Maxamuud Cumar oo xilkaas soo hayay 8deedii sano ee lasoo dhaafay, haddaba halkee ayuu ku dambeeyaa Cabdi?. Ninka badalay Cabdi oo lagu maga...
MAXAAD KA TAQAANAA JEEL OGAADEEN? WARBIXIN XIISO LEH
Warbixintan waxaan ka soo uruurinay dad wakhtiyo kala duwan lagu xiray xabsiga Jeel Ogaadeen. Magacyadooda waxaan u qarinnay sababo amaankooda la xiriira. 1996 ayaa la aasaasay xabsiga dhexe ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiy...
yaa isku haya itoobiya?
Siyaasada deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa muddooyiinkii ugu dambeeyay ay u muuqtay mid aan daganayn Arintan ayaa waxa ay ka dambeeysay ka dib markii uu isbadal guud ka dhacay dalka Itoobiya. Isbadalkan ayaa waxaa hork...
Ebola oo dib uga dillaacay koongo
Fayraska Ebola ayaa mar kale dib uga dillaacay Bariga Jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee Koongo, waxaana la rumaysan yahay in ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya soddon qof. Wasaaradda Caafimaadka ayaa sheegaysa in kiisas cusub oo c...
Dawladda Itoobiya ayaa sheegaysa in ciidamada militarigu ay qaadi doonaan dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si ay u ilaaliso nabadgelyada gobolka Soomaalida ee kuyaal Bariga dalkaas. Kadib markii iskudhacyo qawmiyadeed ...
Marwada koowaad ee dalka mareykanka Melania Trump ayaa taageertay ciyaaryahaka kubadda kolayga LeBron James saacada uun ka dib markii seeygeeda uu bartiisa Twitter-ka ku aflagaadeeyay James. James ayaa wareysi laga qaaday ku shee...
Shirkadda diyaaradaha Eritrea ayaa si rasmi ah u billaawday duullimaadka ay ku imaneyso Addis Ababa. Shirkadda Diyaaradaha Eritrea waxay Addis ababa Timid muddo 20 sanno kaddib. Diaaraddi ugu horreysay oo ka soo kicitantay Asm...
Bannaanbax lagu dalbanayo in wax laga baddalo xaaladda amniga dhalinyarada magaalada Muqdisho ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. Bilihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho waxaa ka dhacayey dilal isdaba joog ah oo dhallinyarada si ...